DAAWO: Sababta Siilaanyo u mucaaraday Shirka IGAD oo uu cadeeyay & ujeedada uu lahaa | Barbaariyaha bulshada
DAAWO: Sababta Siilaanyo u mucaaraday Shirka IGAD oo uu cadeeyay & ujeedada uu lahaa
Madaxweynaha Xukuumadda Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa waxaa uu sharaxaad dheeri ah ka bixiyay ujeedada uu u cambaareeyay qodob ka mid ah 22-kii qodob, ee laga soo saaray Shirkii Madaxda Urur Goboleedka Igad ku yeesheen Magaalada Muqdisho, Talaadadii.
Madaxweynaha Somaliland, ayaa maanta War Saxaafadeed ku cambaareeyay qodobkaasi, oo qeexaayay in shirkaasi xushmad loogu muujiyay qaranimada madax bannaanida Somaliya iyo jiritaankeedaba.
Madaxweynaha oo ka hadlaayay shir uu Madaxtooyada Hargeysa kula yeeshay guddi uu horey ugu magacaabay in ay aqoonsi u raadiyan Somaliland, ayaa marka hore soo dhaweeyay in Magaalada Muqdisho marti-geliso shir ceynkani oo kala ah.
“Waxaa caasimadda dalka Somaliya lagu qabtay shir sanadeedkii Urur Goboleedka Igad. Ugu horayn waanu soo dhaweynaynaa in shirkaasi ka dhaco Magaalada Muqdisho. Waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo horey loo qaaday. Dowladda Somaliland waxay soo dhaweynaysaa dadaalka ay ugu jirto Beesha Caalamka iyo Dalalka Midowga Afrika, sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Somaliya, isla-markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo masuuliyadda saaran. Waxaanu diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano, isla-markaana gacan wayn ka gaysano dadaalada, nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee Somaliyeed. Waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaarta, ay anagana saamayn wayn nagu leedahay. Sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabadooda iyo horumarkooda.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland.
Madaxweynaha, ayaa yiri “Waxaanu cambaareynaynaa War Murtiyeedka ka soo baxay Shirka Madaxda Igad ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada Somaliya. Waxaanu u aragnaa mid la majara habaabiyay oo aan ka turjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda Somaliya iyo Somaliland ka jirta.”
Waxa uu intaa ku daray “Waxaanu u cadeynaynaa Beesha Caalamka inaanay metelin Jamhuuriyadda Somaliland, shakhsiyaad Muqdisho laga cuktay, waxaan u aragnaa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cumaamado dad aan shacbiwaynaha Somaliland dooran ama aanay ceeleeliyo u diran.”